China Wholesale Car Front Shock Absorber-Z11064 mpanamboatra sy mpamatsy | TANGRUI
Ny Shock Absorber dia mampiorina ny fihetsiky ny lohataona mihozongozona amin'ny fiatraikany. Mitohy mihombo ny lohataona ary mivelatra rehefa ampiharina ny hery. Ilaina ny mametra ny fivezivezin'ny lohataona mba hampiononana ny mpandeha.
Ny Shock Absorber dia mifehy ny fihetsiky ny lohataona amin'ny alàlan'ny fanoherana ateraky ny alàlan'ny solika mandalo lavaka kely amin'ny valizy.
■ Rafitra valizy Multi Disc
Ny fampihenana ny contol dia novokarin'ny hafainganana sy ny habetsany ary toy izany ny solika mandalo amin'ny valva. Ny fahombiazana sy ny faharetan'ny valva dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny shock absorber.
Shock Absorber of Tangrui dia mampiditra valizy disk maro ho an'ny fifehezana tsara kokoa.
■ Fitsaboana mafy ambonin'ny
Tangrui dia misy fonosana fametrahana elektro azo ampitahaina amin'ny haavon'ny OE hisorohana ny harafesina hampihena ny faharetana.
■ Fizarana azo antoka
Ny ampahany rehetra amin'ny fingotra sy famehezana dia vita amin'ny ampahany avo lenta izay ampiasaina amin'ny vokatra OE ihany koa mba hisorohana ny famoahana sy hanana fiainana lava.
Brand Ho an'ny BUICK GL8
Previous: Ny rafitra fampiatoana ny kabine Shock Absorber Oem- Z11063
Manaraka: Fiatoana mihantona eo aloha Strut Shock-Z11065
Oop Shock Absorber Autoparts ho an'ny LEXUS-Z11066
Knuckle familiana eo aloha, Shock Absorber Bolt, Shock Absorber fingotra, Hood Shock Absorber, Hub misy kodiarana, Tyre Ball Joint,